Nick Carter Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Nick Carter
Sidee Ganacsiyada Yaryar U Isticmaalaan Software si ay u Maamulaan Xiriirada
Axad, Janaayo 1, 2012 Axad, Janaayo 1, 2012 Nick Carter
Iyadoo in ka badan 90% ganacsiyada yaryar ay adeegsanayaan qaab dijitaal ah oo ah maareynta xogta si loo keydiyo xiriirada, waxay umuuqataa in ganacsiyada yar-yar ay kufeen da'da casriga. Laakiin, waxaan dooneynay inaan ogaano waxa ganacsiyadaan yar yar ku sameynayaan xogta xiriirka. Waxa aan ogaanay ayaa kaa yaabi kara. Waxaad ka heli kartaa natiijooyinka sahanka oo buuxa adresska laba.
Sumadda Avatar: Qabow mise Hal abuur?
Jimco, Diisambar 16, 2011 Nick Carter
Tan iyo markii aan soo qaatay buugga @ kyleplacy iyo @ edeckers ee ku saabsan "Calaamaynta naftaada" waxaan bilaabay in aan qiyaaso go'aan aan qaatay horaantii bilawgii farsamadayda da 'yarta. Sanado kahor, waxaan abuuray shaqsi la yiraahdo Addy. Waxay ahayd muuqaal ka mid ah barnaamijka softiweerka, laakiin intaas in ka badan, waxay ahayd qofka ugu gacan-qabashada badan macaamiisheenna. Ujeeddadaydu waxay ahayd in dadku ay ku xidhaan shaqsigeeda CinwaanTwo ka xoog badan tayda. Way shaqaysay. Iyo maanta, Aniga
Waan ogahay inaan ubaahan doono inaan kuqabto arrintaan, laakiin ma ahi taageere Mac ah. Waayahay, waan iska cadahay inaanan u adkaysan karin. Farta ma saari karo sababta, laakiin halkan waa bilow: si loo sameeyo App ah iPhone-ka muuqaalka leh, waa inaad ku horumarisaa oo keliya barnaamijka 'Mac' ee leh barnaamijka 'Mac' oo ah maalgelin ka badan $ 2,000. Si kastaba ha noqotee, IPhone waa suuq-beddele iyo suuq-geyn suuqeed oo ganacsatadu ay tahay inay wax ka qabtaan. Marka, adigu
Talaado, July 5, 2011 Axad, Sebtembar 30, 2012 Nick Carter
Waxaan ka baqayaa inaanan helin macluumaad cusub oo aan la wadaago akhristayaasha Martech Zone, kaliya codsi caawimaaddaada. Ka dib markaad daawato fiidiyaha hoose, fadlan midkood: Ii sheeg haddii ay jiraan waxoogaa shaqo ah oo tan ka mid ah oo aan seegay, ama… Dib u soo cusbooneysii cusboonaysiinta xaaladdan illaa ay farahaaga ka dhiig baxayaan si ay qof ugu soo jeediso Facebook. [youtube: http: //www.youtube.com/watch? v = 5G-90bZXVjw]
Talaado, Juun 28, 2011 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Nick Carter
Dhawaan, waxaan bilaabay bogag badan oo cusub. Maaddaama CinwaankaTwo uu koray waqtigayguna xoroobay, waxay abuurtay duufaanno qumman oo fikrado cusub iyo waqti firaaqo ah oo lagu fuliyo, marka waxaan iibsaday daraasiin domains ah waxaanna hirgaliyay bogag yar yar oo bidix iyo midig ah. Dabcan, waan samir badanahay, sidoo kale. Waxaan hayaa fikrad maalinta Isniinta, waxaan dhisaa Talaadada, waxaana rabaa taraafikada Arbacada. Laakiin waxay qaadan kartaa maalmo ama toddobaadyo ka hor cusub
Sida Loo Helo Casiirka Isku Xirka Youtube
Jimce, Maarso 4, 2011 Saturday, May 11, 2013 Nick Carter
Waxaan soo qabtay guulo badan oo aan ka faa'iideysanayay Youtube si aan u xoojiyo ku-xirnaanshaha bogagga degitaanka ee ereyga muhiimka ah. Waa geedi socod fudud oo waa kan sida ay u socoto: Abuur bog degitaan leh oo leh eraygaaga muhiimka ah URL-ka, xarfaha loo kala saaray. Tani waxay ka caawineysaa bot-ka inay u eegaan ereyada si ka duwan sidaas darteedna waxay qirayaan ku-xirnaanshahaaga weedhaha aad beegsanayso. Tusaalahan, waxaan u isticmaali doonaa http://www.addresstwo.com/small-business-crm/ Abuur fiidiyoow aad ku dhex gasho
Teknoolojiyadda Nolosha Nolosha: Marka AAN LAGU XIRIN
Isniin, February 28, 2011 Isniin, Maarso 7, 2011 Nick Carter
Waxaan jeclaan lahaa in aan ka takhaluso xoogaa xan ah. Kama soo horjeedo maal-gashiga maal-gashiga. Uma maleynayo in maalgashadayaasha malaa'igtu runtii yihiin jinniyo. Xitaa uma maleynayo in qof walbaa ama xitaa inuu “bootstrap” ganacsigiisa si guul leh ugu guuleysto. Si loo caddeeyo, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego sababaha # 1 ee adiga iyo lamaanayaashaada aad ugu baahan doontaan inaad bilowdaan si xishood la’aan ah inaad ugu dhiirrigelisaan fikraddaada ganacsi ee badhkeed dubtay cid kasta oo heysa lacag kaash ah: Half-Life. Sida erayga “bilow”